Novak Djokovic Vs Jan-Lennard Struff Live Stream: Otu esi lelee US Open Tennis N'ebe ọ bụla - 【Comparison】
Mgbasa ozi MGBE REPSOL 10W-40 Motorcycle Oil, 1L
Ụdị: Ụgbọ ala akọwapụtara
Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff live stream: otu esi ekiri US Open tennis ebe obula
Novak Djokovic bụ ọkacha mmasị kachasị amasị ụmụ nwoke na-alụbeghị nwanyị na 2020 US Open, na ọnụ ọgụgụ nke ụwa na-achọ igwe dị nro, nke na-emeri emeri anyị na-ele anya ịhụ na Flushing Meadows Ndị Serbia meriri Damir Dzumhur na ntanetị nke mbụ na nke mbụ, wee Kyle Edmund na anọ na nke abụọ, iji debe ọnọdụ ya na agba nke atọ a megide German Jan-Lennard Struff. A na-eme egwuregwu taa maka mgbede na Arthur Ashe Stadium; Soro ntuziaka anyị iji mụta ụzọ niile ị nwere ike isi lelee Djokovic na Struff ndụ iyi ma lelee ihe niile 2020 US Open tennis site na ebe ọ bụla na Fraịde a.
Djokovic na Struff dị ndụ
Novak Djokovic chere Jan-Lennard Struff ihu na Arthur Ashe Stadium, nke kachasị na US Open, n'abalị a na nke mbụ n'ime egwuregwu abụọ nke abalị. Egwuregwu ahụ na-atụ anya ịmalite gburugburu 7pm ET / 4pm PT, ma ọ bụ n'etiti abalị UK. A na-egosi ndụ egwuregwu niile na nkọwapụta TV dị n'okpuru, ma ị nwere ike ilele ọkacha mmasị gị kachasị amasị gị site na ebe ọ bụla na-anwale ikpe ExpressVPN 100% na-enweghị ihe egwu.
Djokovic mechara merie US Open n’afọ 2018, kụrụ Juan Martín del Potro n’ihu nke ikpeazụ na nke ikpeazụ. Mmeri a mere ka ọ nwee aha US Open nke atọ wee tinye ya na asọmpi 14 Grand Slam, n'akụkụ nnukwu Pete Sampras. Kemgbe ahụ, Novak agbakwunyela Slams atọ ọzọ na ndekọ ya, ma nwee ọgbụgba dị ebube na 18 na New York na-esote izu.
Naanị ụmụ nwoke abụọ nwere nnukwu mmeri Slam karịa Djokovic na agbụrụ ahụ, Rafael Nadal si na US Open nke afọ a pụọ ​​maka nchedo nchekwa, Roger Federer nwetakwara mmerụ ikpere nke ga-eme ka ọ pụọ n'ọsọ ahụ. Ihe maka ndị ọzọ. nke afọ: O doro anya na Serbinator kachasị mmasị maka nnukwu ihe nrite, ha nọkwa ugbu a na egwuregwu 28 na-enweghị mmeri, malite na November nke afọ gara aga.
N'etiti Djokovic na otu agba na agba nke anọ, ebe a kụrụ ya n'afọ gara aga, bụ 29th Jan-Lennard Struff. Djoko kụrụ aka na Struff na ụzọ ya iji merie na Australian Open na Western & Southern Open n'afọ a, na German ga-achọsi akụkọ ihe mere eme ike ịghara imeghachi na Queens. taa.
Nwa nke 30 emebeghị ka ọ gafee agba nke atọ nke US Open n'ihu, ọ ga-ewepụkwa ihe ịtụnanya kachasị nke asọmpi ahụ iji mee ya oge a. Fraịde kwere nkwa ijere nnukwu abalị ọzọ nke egwuregwu tennis na ama egwuregwu Arthur Ashe, yabụ gụrụ ma sonyere anyị ka anyị na-egosi gị otu esi ekiri Novak Djokovic na Jan-Lennard Struff na ntanetị taa wee nweta iyi iyi si USA. ụwa. Ugbu a.
1 Etu esi lelee mgbasa ozi nke ndụ Novak Djokovic site na mpụga obodo gị
2 Etu esi lelee US Open Tennis: Nweta Live Live nke Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff na UK
3 Esi lelee Novak Djokovic na Jan-Lennard Struff n'efu: US Open Tennis America Live Stream
4 Murray na Felix Live: Etu esi lelee tenis US Open na ntanetị na Canada taa
5 Etu ị ga - esi bie iyi US Open 2020 wee lelee Tennis Online na Australia
Etu esi lelee mgbasa ozi nke ndụ Novak Djokovic site na mpụga obodo gị
Maka ị nweta nkwanye na ịkọwapụta nkọwa na mba ndị nwere mmasị tenis dịka US, UK, Australia, Canada, na New Zealand, gbadaa ala - ihe niile ịchọrọ ịma bụ ebe ahụ.
Mana ọ bụrụ na ị gbalịa ile mkpuchi gị n'ime ụlọ site na ebe na-abụghị obodo gị, n'oge na-adịghị anya ị ga-abanye na nsogbu: geoblocking. Nke a bụ ebe onye mgbasa ozi na-egbochi gị ikiri mgbasa ozi ha si mba ọzọ. Ọ bụ nsogbu nkịtị maka ndị na-egwu egwuregwu gburugburu ụwa. N'ụzọ dị mma, enwere ngwọta dị mfe.
Etu esi lelee US Open Tennis: Nweta Live Live nke Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff na UK
Gbalịa Amazon Prime n'efu maka ụbọchị 30
Amazon nwere ikike ịkwanye US Open tennis na UK, yabụ ndị isi ndị Amazon Prime nwere ike igbanye omume niile a na-akwụghị ụgwọ.
Novak Djokovic na-eme ihe n’etiti abalị taa, na egwuregwu mbụ nke egwuregwu taa na Arthur Ashe Stadium.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibanye tenis na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị, Amazon Prime Video ngwa dị maka gam akporo site na Google Play na ngwaọrụ Apple site na Storelọ Ahịa App.
Amazon Prime ndị otu na-efu € 79 kwa afọ ma ọ bụ .7.99 XNUMX kwa ọnwa, enwere ike ịkagbu n'oge ọ bụla. Ndenye aha ahụ ga-enye gị ohere ịbanye n'ọbá akwụkwọ Amazon nke ihe nkiri TV na ihe nkiri, yana nnyefe otu ụbọchị na-enweghị njedebe na iwu Amazon si UK.
Ndị ọrụ ọhụụ nwere ike ịdebanye aha maka ụbọchị iri atọ nke ụbọchị Amazon Prime na-enwe ohere ịnweta mkpuchi egwuregwu na-ebi ndụ, yana ịbupu otu ụbọchị n'efu na ịzụrụ site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Amazon. n’oge a.
Ọ bụghị na UK, mana ị chọrọ ile tennis na akaụntụ Akaụntụ gị? Betzọ ị kachasị mma bụ ibudata ma wụnye VPN, wee jikọọ na adreesị IP UK.
Esi lelee Novak Djokovic na Jan-Lennard Struff n'efu: US Open Tennis America Live Stream
Na United States, Flushing Meadows mkpuchi sitere n'ikike nke ESPN na ESPN 2 - A na-ekpuchi egwuregwu Novak Djokovic nke ESPN site na 7pm ET / 4pm PT.
Ebe ọ bụ na ESPN bụ ọwa USB, nke ahụ pụtara na ọ ga-adị mkpa ka ị denye aha iji lelee Novak Djokovic na Jan-Lennard Struff na ntanetị, ma ọ bụ nwee ezigbo ọrụ iyi egwu iji rịọ.
N'ime ọtụtụ nhọrọ dịgasị iche iche, nke kachasị mma maka ndị na-egwu egwuregwu tennis na-achọ ilele mgbasa ozi ndụ nke US Open bụ Sling TV, nke ngwugwu Sling Orange gụnyere ọwa ESPN maka naanị € 30 kwa ọnwa. Ọ dị ọtụtụ ihe karịa asọmpi ahụ na ọtụtụ ihe na-erughị USB!
Nke kachasị, Sling na-enye oge ikpe n'efu ka ị nwee ike ịnweta egwuregwu tennis n'efu n'oge akụkụ asọmpi ahụ ma nweta ọrụ maka onwe gị.
Ndị debanyere aha ọhụrụ ma ọ bụ ndị dị na US gụgharia ọrụ ka nwere ike ịnweta ikpo okwu ọ bụla ha chọrọ si mba ọzọ; ihe niile ị chọrọ bụ enyemaka nke ezigbo VPN.
Murray na Felix Live: Etu esi lelee tenis US Open na ntanetị na Canada taa
Na Canada, ị nwere ike ịlele US Open na TSN na Bekee ma ọ bụ na RDS na French, mana ọzọ, ndị a bụ ọwa dị oke ọnụ na-ejikarị ngwugwu TV akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ n’inweta ha dị ka akụkụ nke nkwekọrịta USB gị, ị ga-enwe ike ịbanye na nkọwa nke onye na-eweta gị ma nweta iyi dị ndụ site na US Open. Dị ka ọ dị na United States, Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff ga-amalite na 7 elekere ET / 4 pm PT.
Ma ọ bụrụ na ị kpebie ịdenye aha ma ọ bụ meela otú ahụ, cheta na ị nwere ike iji ọrụ gụgharia egwuregwu kachasị amasị gị soro gị gaa ebe ọ bụla ị na-aga, na-enye ya VPN ịnwale. 1 banyere 100% dị ize ndụ n'efu maka oge. Bọchị 30 ma soro ntuziaka ndị dị n'elu.
Etu ị ga - esi bie iyi US Open 2020 wee lelee Tennis Online na Australia
Iji lelee US Open, ihe ị ga-amata bụ na ESPN nwere ikike ịgbasa egwuregwu tennis na-ebi na Australia ma ga-agbasa asọmpi 2020.
A na-enweta ọwa na TV na-akwụ ụgwọ site n'aka Foxtel na omume a na-amalitekarị na Australia na 2am AEST kwa ụbọchị, ọ bụ ezie na mgbede abalị Fraịde na Arthur Ashe Stadium na-amalite na 9am na Saturday. Oge Australia, ụbọchị Novak Djokovic na Jan-Lennard Struff ga-ebido.
Nke a bụ n'ezie ezigbo akụkọ maka ndị na-egbutu eriri, dị ka ọrụ ntanetị nke Australia Kayo Sports gụnyere mkpuchi ESPN na ngwugwu ha. Egwuregwu Kayo Egwuregwu na-efu € 25 kwa ọnwa ma nye ndị ọrụ ohere ịbawanye na ngwaọrụ abụọ n'otu oge, ebe atụmatụ Kayo Sports Premium na-enye iyi iyi atọ maka € 35 kwa ọnwa.
Ọ baghị uru ikwu, nke a na-eme ka ọ dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ya na ndị enyi, ezinụlọ, ma ọ bụ ndị ọzọ tenis Fans, na Kayo na-enye oge nnwale n'efu ka ị wee nwee ike ile akụkụ nke ihe omume ahụ n'efu na August. .
Nke ka mma, SBS Viceland n'efu ga-abanyekwa na omume ahụ malite na Wednesde 9 Septemba, mgbe egwuregwu ahụ kụrụ na 2am. Nke a pụtara na ndị na-ekiri Australia nwere ike iji ọrụ gụgharia n'efu SBS On Demand na-akụ.